Raw DNP vatengesi (119-26-6) hplc≥98% | AASraw Fat Kurasikirwa powder
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / DNP
MUTSVENE unobatanidzwa uye unyanzvi hwekugadzira kubva ku gram kusvika mukurongeka kweDNP (119-26-6), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
I.DNP (51-28-5) Basic Characters:
Color: Chiedza chine jira kana yellow kristalline powder
Nhamba yevanhu vanoda kushaya uremu kuburikidza nekureruka kwepilisi yakave ichiwedzera. Vanodzokera kune internet kuti vawane mazano pamwe nemirairo. DNP (C6H4N2O5) kana 2, 4-Dinitrophenol 51-28-5 inorasikirwa nehutachiwana huwandu hwakakosha hwakatanga huchizivikanwa mu1930. Kutsvakurudza kunoratidza kuti kana munhu atora 300-400 mg yemishonga zuva rega rega, bhaari yake yemagetsi inogona kuwedzerwa ne 36% kusvika ku95%.
Makemikari zvinhu zveDNP
DNP inotora basa reproton ionophore mumasero masimba emuviri. Proton ionophore inoreva kuti inhengo ine simba rekuvhara proton, inozivikanwa seyidrogen cations kumativi ose emitumbi yezvinhu zvipenyu. DNP inoparadzira proton gradient iyo yose mu membrane ye mitochondria kana chloroplast uye somugumisiro, simba reproton rinokurudzira, simba rinoshandiswa nemasero mhenyu kuita vazhinji vavo adenosine triphosphate (ATP) chemikemiksi emagetsi, inoputsika. Iyo proton gradient inorasikirwa nesimba rayo nenzira yekupisa pane simba rinoshandiswa kubudisa ATP. DNP inonyanya kuzivikanwa mukutsvakurudza kwezvinyorwa zvesayenzi sezvo vatsvakurudzi vanoishandisa nguva dzose mu chemiosmotic bioenergetics tsvakurudzo, pakati peimwe nzira dzekutakura dzinoitika mukurarama membrane.
Tsanangudzo yakajeka yeDNP
DNP, iyo inonziwo Dnoc, Dinitro, Nitrophen kana Dinosan, inoreva chimiro chinoshingaira icho chinonyanya kukosha kukanganisa nzira yakakwana iyo masero mapenyu anopfuudza. Pakutanga, chigadzirwa chacho chinowanikwa mune zvakasiyana-siyana zvemashandisirwo ekushanda. Kunze kwekushandiswa sekuputika, chikwata chacho chakauyawo seine pesticide, mifananidzo yekugadzira mapurisa, muchengeti wemapuranga pamwe nehairybicide.
Maurice Tainter, mutsvakurudzi paYunivhesiti yeStanford, ndiye munhu wokutanga kuziva kuti mishonga iyi inokwanisa kukonesa ure nekukurumidza. Kuwanikwa kwakagadzirwa mu1933 uye muongorori akazotanga kutengesa mishonga sepamusoro pe-counter-counter dietary support.
Action maitiro eDNP
DNP inoshanda nekuvhiringidza nzira yakarongeka iyo masero anopfutidza, zvichiguma zvichiita kuti uwandu hwemagetsi uye kushandiswa kwesimba kweesero kuwedzere ~ ~ 11% pa 100mg. Inowedzera huwandu hwehuni hunokonzerwa muchitinha chipenyu mune imwe nzira inonzi kusunungura. Iyo mishonga inoitawo kuti seni inobatwa nayo ive yakaderera zvakakwana kusvika kune kuputika kweAATP. ATP ndiyo simba iro muviri wemunhu unofanirwa nokuda kwebasa rose.
Mamwe masero emuviri wedu ane zvikamu zvakasiyana-siyana zvinonzi mitochondria ane basa guru nderokudzikisa simba yatinoshandisa pamabasa akasiyana-siyana ezvitongi. DNP inongodzivisa kushanda kwemitochondria, zvichiita kuti kuwedzera nokukurumidza mumuviri kupisa uye kudengesa kwemaitiro. Kuwedzerwa kwezvinhu zviviri zvinokonzera kurema kwekushaya kweAIDS 1.5kg muvhiki.
Pamusoro pemushumo wekutanga weDNP nekucheka uye tainter ichiratidza kuti inogona kuwedzera mutumbi wehutachiona hunoshamisa; mishonga iyi yakazoshandiswa zvikuru mukudya mapiritsi, kunyanya mu1930s. Mushure mekunge mishonga iri pamusika kwegore rimwe chete, Tainter yakabudisa mushumo unoratidza kuti wakashandiswa kurapa vanhu vanopfuura 100,000 muUnited States, pakati pevamwe pasi rose.
Kuita seprotonophore, DNP inobvumira kupindira kwemaprotoni kuburikidza nemukatikati mukati memitochondria, saka inopfuurira ATP synthase. Somugumisiro, kubudirira kwekutengesa kweEATP kunoderedza. Chimwe chikamu chekufema kwemajeri simba rinopera mumasimba ekupisa.
Ukuru hwekushanda kweAtP kusagadzikana kwemhepo kunobva pane chiitiko cheDNP icho munhu anotora. Nhamba yakawedzerwa yemishonga inotungamirira kune huwandu husina simba hwekugadzira magetsi uye kuwedzerwa kwehuwandu hwemagetsi hunoguma nekuwedzera kupisa kwemafuta emuviri. Nokuda kwechikonzero ichocho, DNP inoratidzirwa pakati pekushanda kunobatanidza unhu hunokonzera phosphorylation agent.
Nhamba yeDNP (119-26-6)
Tinokurudzira titration kumushandi wezuva nezuva kubva ku200mg kusvika ku400 mg. Nhamba yezuva nezuva inofanira kutorwa kwevhiki mbiri.
Migumisiro ye2, 4-DNP inowanzobatanidza kuwedzera kwehutachiona hwemagetsi, chimiro chemuviri uye kufema (muvanhu). Somugumisiro, muviri unowedzera kupfutidza kwawo senzira yekugadzirisa kuchinja kwacho kuitira kuti uwedzere maviri acho ane oxygen yakawanda. Kuwedzerwa kwekushisa kwemuviri kunokonzera mhirizhonga vasodilation kuti inotonhe muviri apo huwandu hwekupisa hunowedzera kuitira kuti utungamirire kupararira.
Kuratidzwa Kwenguva Pfupi
Kana pane chero mukana wekuti iwe unofema, kana inopinda mukati meganda rako, Dinitrophenol inogona kukukanganisa iwe zvakashata. Kurisa ganda kana kusangana nemeso nemishonga kunogona kukonzera kutsamwa kukuru. Iyo mishonga inogona kuchinja inowanzo muviri yemetabolism, zvichiita kuti kuwedzere mumuviri wekushisa.
Kunze kwekuti, zvinoitika zveDinitrophenol pane imwe nheyo yenheyo zvinogona kuita kuti unzwe uchinetseka kana "pini nemasero" kunzwa. Iwe unogonawo kuona maoko uye tsoka zvakasimba nekuda kwechirwere.
Dzimwe mimwe migumisiro yekutsvaga kumushonga inosanganisira bluing yemiromo uye ganda, fivha, misoro, kushungurudzika, kuparara uye kusaziva kwenguva refu. Mune mhosva yakaoma inosanganisira mazinga akareba emudzvinyiriri, mapapu angangodaro anokonzera mvura inogona kuisa kurufu. Kunyanya kunetseka kunokonzera kutsamwa kwepapufu kunogona kutungamirira mukukanganiswa uye nekufema zvinetso.
Nguva Yenguva Yakareba
Kana ganda rako richipinda kuti uone neDinitrophenol kakawanda kana kwenguva yakareba, iwe unogona kuwona:
Kuchengetedza kuurayiwa kwechipfuva muitsvo
Bronchitis inoratidzirwa nekukanganiswa uye nekufema zvinetso
Nervous system inoparadza
Kutora kukuvara mumadzimai ane pamuviri (kana yakanyanya kuwedzerwa)
Anemia nekuda kwekukuvadzwa kwemasero eropa ne 2, 4-chiremera (kana ichidzokororazve)
Rufu, kunyanya mukati memaawa 24 nokuda kwechiitiko chakaoma
Kana akaurayiwa aripo pachikamu chinotambudza chechiyero chechirwere, iye anogona kunyanya kushivirira zvinetso zvakadai sekushaya simba kana kuti hepatitis inouraya gare gare muupenyu hwake.
Kune rumwe rutivi, vamwe vanhu vakave vachirondedzerwa kakawanda kumushonga wezvinodhaka unhu hunonakidza, somuenzaniso, kunzwa zvakanyanya simba uye kufara.
DNP (119-26-6) Final Words
Kunyange zvazvo iri kukwanisa kurasikirwa nemishonga, DNP inogona kutungamirira kune zvakasiyana zvemigumisiro yakaipisisa zvimwe zvingave zvinouraya kana zvichishandiswa nekusaremekedza mharidzo yayo yakakodzera uye mitemo yekushandiswa. Nokudaro, iwe unofanirwa kuve wakanyatsochenjerera paunenge uchibata mishonga.
Nyaya yezvechirwere toxicology: nyanzvi yepamusoro yeAmerican College of Medical Toxicology 7 (3): 205-12
Tainter, ML et al. Kushandisa dinitrophenol mukurema uye mamiriro akafananaMushumo wekufambira mberi. JAMA. 1933; 101: 1472-1475.
Dunlop, DM. Kushandiswa kwe2: 4-dinitrophenol sechigadziriso chemagetsi. Br Med J. 1934; 24 (1): 524-527
Sibutramine powder: Works, Dosage uye Side effect
Iva wokutanga kuongorora "DNP" kukanzura mhinduro